> Resource > Music > Music Transfer ka iPad in iPad fudayd
Ma ku xiran badan songs wanaagsan-faraxa badan ee aad saaxiib ee iPad iyo idinkaa iska leh, sidaas darteed laba aad rabto in aad ka iPad wareejiyo music in iPad qaybsiga leh kasta oo kale? Ma helay a iPad, iPad mini cusub qabow, tusaale ahaan, iyo hadda go'aan si ay u gudbiyaan music oo dhan ka jir iPad ah in mid ka mid ah oo cusub? Wax kasta oo aad la kulanto, waxa aad samayn doonaa?
Sida caadiga ah waa ay adag tahay in aad nuqulka music ka iPad in iPad haddii aad haysato qalab-saddexaad. Halkan, si adag ayaan ku talineynaa inaad isticmaasho iPad in iPad kala iibsiga awood leh - Wondershare TunesGo . Barnaamijkan ma aha oo kaliya awood inaad nuqul ka music la ratings, qashanka iyo ka badan oo ka mid iPad in kale, laakiin sidoo kale u guuraan playlists, videos, xidhiidhka ka dhexeeya laba iPads. IPads sokow, barnaamijkan taageertaa sidoo wareejinta macluumaadka u dhexeeya iPhone, iPod, PC iyo Lugood.
Music ka iPad dhaqaaq iPad fudayd
Download this iPad in iPad kala iibsiga on your computer. Markaas raac tilmaan-hoose si ay u gudbiyaan music iPad in iPad.
Tallaabada 1. Daahfurka iPad si kala iibsiga iPad
Bilowgii, rakibi iyo abuurtaan iPad in iPad kala iibsiga on your computer ka dib markii aad ka soo dejisan waxaa. Markaas waa in aad ku xidhi aad laba daydo iPad via fiilooyinka USB. Barnaamijkan ugu dhakhsaha badan lagu ogaan doonaa qalab aad. Markaas dhammaan faylasha ku daydo iPad ayaa la soo bandhigi doonaa buugga geed bidix ee interface ugu weyn.
Fiiro gaar ah: Fadlan soo baxdo iyo rakibi Lugood on your computer ka hor sameeyo music ku wareejinta dhexeeya iPads.
Tallaabada 2. Transfer heeso ka iPad in iPad
On the geed buugga tagay, guji saddexagalka ee tab iPad in aad go'aansato in aad u dhoofiyaan music. Sida aad ka arki, dhammaan faylasha on iPad waxaa lagu soo bandhigi doonaa. Markaas riix "Media". Ka dibna riix "Music" ka dib markii uu furmo suuqa warbaahinta u muuqataa on Murayaad saxda ah.
In uu furmo suuqa music ah, ka heli files music aad doonayso in lagu wareejiyo si iPad kale. Guji "Dhoofinta in". Marka liiska hoos-hoos u muuqataa, waa in aad doorato "Dhoofinta in aad iPad". Markaas barnaamijkan bilaabmaa sameeyo music ku wareejinta. Dhig laba iPad lagu daydo ku xiran your computer ka hor darfaheeda music wareejinta ah.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo taageertaa iPad hawada, iPad mini bandhigay isha, iPad mini, iPad bandhigay isha, iPad Cusub, iPad 2 iyo iPad. Waxaa la socon kara macruufka 9/8/7/6/5.
Qodobbadani weyn? Waa hagaag, kaliya download barnaamijkan waa in hadda isku day!